I-Tai Chi Traveller's ART STUDIO w / AC
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDominika & Igor
KWINTLIZIYO YEZIKO LESIXEKO ESIDALA imizuzwana embalwa ukusuka kwiMain Square & Riverfront. Ngaphantsi komzuzu ukuhamba ukuya kwezona ndawo zinomtsalane zedolophu, iindawo zokutyela, iicafe. 74 m2 suite - 3 amagumbi, ikhitshi, igumbi lokuhlambela, indlu yangasese, umoya/container. Unoxolo. Indawo yokupaka isezantsi nje.
Indlu eyi-74 m2 kumbindi wedolophu inamagumbi okulala amabini amakhulu, igumbi lokutyela, ikhitshi, igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese. Kukho ibhedi ephindwe kabini ye-160x200 cm kwigumbi elinye lokulala, kunye neebhedi ezimbini ezingama-90x200 cm kwelinye. Bonke oomatrasi batsha. Kananjalo singabonelela ngeebhedi zabantwana ababini/iibhedi simahla.
Le ndlu ikumgangatho ophantsi kwaye inendawo yayo yokungena ngqo ukusuka kwisitrato (indawo yoxolo yokuhamba kuphela).
Ime phakathi kweMaribor's Main Square kunye neDrava Riverfront, imizuzwana nje ukusuka kwindawo enomtsalane kubakhenkethi njengeWorld's Oldest Vine, Water Tower, Jewish Square & Tower, Old Synagogue, Drava Riverfront Promenade, Main Square eneHolo yesiXeko esiDala kunye neSikhumbuzo seSibetho, esiDala. ibhulorho, iSitrato sePost kunye ne-pubs, iikhefi kunye neendawo zokutyela, iSitrato saseGosposka (Herren Gasse) kunye neevenkile zayo, njl.
4.92 · Izimvo eziyi-240
Awunako nje ukubetha le ndawo esembindini. Izinyuko ezimbalwa phezulu yiMaribor's Main Square. Kwelinye icala leMain Square yiPost St. ineekhefi zayo, ii-pubs kunye neeresityu. Ekupheleni kwePost St. kukho iCathedral kunye neMaribor eyaziwayo yeSlovenian National Theatre & Ballet. Imizuzu embalwa ngaphezulu kwaye ufikelela kwipaki enkulu kunye nentle yesixeko.
Amanyathelo ambalwa ezantsi kwigumbi ilele iDrava Riverfront enendawo yokukhwela, iikhefi, iindawo zokutyela, owona mdiliya mdala wehlabathi kunye nezinye izinto ezinomtsalane zaseMaribor. Ezantsi nje kwendlela yokukhwela kukho intengiso yeziqhamo kunye nemifuno yesixeko, iPuppet Theatre yesixeko kunye nevenkile enkulu (Hofer).
Kwaye okona kubalulekileyo, le ndlu ikwikona enoxolo kangangokuba awuyi kukholelwa ukuba usembindini wesixeko.
Umbuki zindwendwe ngu- Dominika & Igor
Siyazamkela iindwendwe zethu eflethini kwaye sibanike lonke ulwazi oluyimfuneko malunga neMaribor kunye nemisebenzi yasekhaya, kodwa kamva sibashiya bayokonwaba eMaribor bodwa. Sisoloko sikhona kubo ngefowuni.
UDominika & Igor yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Maribor